ShweMinThar: အာဠာဝက-အမေး၊ ဗုဒ္ဓ-အဖြေ
အာဠာဝက ဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးထဲတွင် တထောင့်တနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အာဠာဝက နတ်ဘီလူးအား မြတ်စွာဘုရာရှင်မှ သည်းခံခြင်း၊ မေတ္တာဓာတ်ဖြင့် လွှမ်းခြုံ အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။
အာဠာဝကဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ခြိမ်းမြောက်သမှုပြု၍ အနိုင်ရယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အချည်းနှီးသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဒူးထောက်၍ အရှုံးပေးခဲ့ရသည်။ သို့သော် လွယ်လွယ်နှင့် အရှုံးမပေးလိုသော အာဠာဝကဘီလူးသည် ဘုရားရှင်အား နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မေးခွန်းများ ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အာဠာဝက-၏ မေးခွန်းနှင့် ဘုရားရှင်၏ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များအား (သံယုတ်ပါဠိတော် ယက္ခသံယုတ်၊ အာဠာဝကသုတ်)၌ ဟောကြားဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အာဠာဝကဘီလူး အနေဖြင့် မေးခွန်းများအား ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မေးခဲ့ရသော်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က လွယ်လွယ်ကူကူပင် ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။
အဘယ်ဥစ္စာသည် ဤလောက၌ ယောက်ျားအား မြတ်သော ဥစ္စာ ဖြစ်ပါသနည်း။?
ဤလောက၌ ယုံကြည်မှု တည်းဟူသော သဒ္ဓသည်သာလျှင် ယောက်ျားမြတ်ဥစ္စာ ဖြစ်သည်။
အဘယ်တရားသည် ကောင်းစွာ လေ့ကျင့်သည်ရှိသော် ချမ်းသာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်နည်း။?
အသင် အာဠာဝက ဤလောက၌ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်အပ်သော ဆယ်ပါးသော (သုစရိုက်) တရား သည်သာလျှင် ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အရသာတို့တွင် အဘယ်သို့သော အရသာသည် အချိန်မြိန်ဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။?
အရသာတို့တွင် သစ္စာတရားသည် အချိုမြိန်ဆုံးသော အရသာဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ဤလောက၌ အဘယ်သို့သော အသက်မွေးခြင်းသည် မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း ဖြစ်သနည်း။?
ဤလောက၌ ပညာဖြင့် အသက်မွေးခြင်းသည်သာလျှင် မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့် ကျော်စောခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသနည်း။?
သစ္စာတရားဖြင့်သာ ကျော်စောခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
အဘယ်အကြောင်းဖြင့် အဆွေခင်ပွန်းတို့အား ဖွဲ့နိုင်ပါသနည်း။?
ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်သော သူသည်သာ အဆွေခင်ပွန်းတို့ကို ဖွဲ့နိုင်ပါသည်။
ဤလောက၌ အဘယ်အကြောင်းဖြင့် တမလွန်လောကသို့ ရောက်ရှိသည်ရှိသော် မစိုးရိမ်ပါသနည်း။?
အကြင် အိမ်ထောင်မှုကို ရှာမီးလေ့ရှိသော ယုံကြည်မှုရှိသူအား
ဤတရား လေးပါးရှိသော သူသည်သာလျှင် တမလွန်ဘဝသို့ ရောက်သည်ရှိသော် မစိုးရိမ်ရချေ။
အာဠာဝကဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ဖြေဆိုတော်မးခြင်းအပေါ် ကျေနပ်အားရခြင်းနှင့်အတူ ကြည်နူးပီတိပါ ဖြစ်ရသည်။ ထို့နောက် အာဠာဝကသည် သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပြီးနောက် ဘုရားရှင်အား ကြည်ညိုမြတ်နိုးစွာဖြင့် လက်အုပ်ချီကန်တော့လိုက်လေတော့သတည်း။
Credit : http://www.mawluu.com/2012/06/blog-post_15.html
Posted by Alex Aung at 4:09 PM